Tenenin’ny olompirenena ny governemanta hifidy ny fisokafana ao amin’ny ITU · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2019 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, 한국어, English
(Marihina fa tamin'ny volana Novambra 2012 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nandrisika ny governemantany hifidy ny fisokafana any amin'ny fihaonamben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Fifandraisandavitra (ITU) ireo mpanandratenin'ny zon'ny aterineto. Raha nanomboka ny Alatsinainy, nanapa-kevitra ireo Fanjakana mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana raha tokony ho hitarina mankany amin'ny fandrindrana ny aterineto ny fahefan'ny ITU – hetsika izay mety handrahona ny fiainana an-takonana, ny fahalalaham-pitenenana, ary ny fidirana amin'ny vaovao ho an'ny mpisera aterineto manerana izao tontolo izao.
Sarintany maneho ny fifamoivoizan'ny aterineto manerantany. Nahazoana alalana ho ampiasaina indray. Sary acy ain'i Martin Irvine.
Nilaza ireo solontenan'ny governemanta ao amin'ny ITU fa hisy ny fifidianana ao amin'ny fihaonambe amin'io alatsinainy io mba hamaritana ho atrehin'ny besinimaro na tsy ny fotoam-pivoriana sasantsasany. Ahafahan'ny olom-pirenena voakasik'izany mitazona ny governemanta ho tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ao amin'ny ITU azon'ny daholobe atrehina.
Nilaza ny ahiahiny ireo mpisera aterineto manerana izao tontolo izao amin'ny fifanarahana ataon'ny ITU ka amin'ny alalan'ny fampiasana fanangonan-tsonia an-tserasera sy ny bilaogin-dahatsoratra ary ny tambajotra sosialy no anaovany izany. Nahangona sonia maherin'ny 32.000 avy amin'ny vondrona sy ny olona tany amin'ny firenena miisa 164 ny fanambaran'ny Mpiaro ny Fahalalahan'ny Aterineto Manerantany izay nampiantranoin'ny vondrona mpiaro ny zo nomerika any Canada OpenMedia, ary voadika tamin'ny fiteny miisa 18 izany, noho ny mpilatsaka an-tsitrapo Lingua Global Voices. Namorona fitaovana ho an'ny mpisera hanamorana ny fanoratana mailaka manokana any amin'ny solontenam-pirenena ny vondrona.
Tokony ampiasa ireo fitaovana sy nampiaka-peo mba ho ren'ny fihaonambe ireo mpamaky miahiahy ny amin'ny tsiambaratelo manokana, ny fahalalaham-pitenenana ary ny zon'olombelona an-tserasera hafa manan-danja. Nanomboka tamin'ny andro nanoratana ny lahatsoratra ka hatramin'ny 3 Desambra dia afaka nifandray tamin'ny solontenan'izy ireo ireo mpisera manerana izao tontolo izao ary nangataka azy ireo mba hifidy hahatonga ny fihaonambe ho malalaka sy mangarahara araka izay tratra.